WonderFox DVD Video Converter 9.0 DC 22.07.2016 + Portable Full |58.2MB ~ ဘလော့ခရီးသည်
WonderFox DVD Video Converter 9.0 DC 22.07.2016 + Portable Full |58.2MB
WonderFox DVD Video Converter 9.0 ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Update လေးပါ။
အင်တာနက်ပေါ်မှ YouTube အပါအဝင် ဗီဒီယို၊ရုပ်ရှင်များကို တိုက်ရိုက် Search, Download, Convert ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲ ကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ YouTube, Google Videos, VEVO, Facebook, Dailymotion, AOL, Metacafe, MegaVideo, Vimeo, Break. BlipTV, Veoh, VideoBash, LiveLeak, MyVideo, FunnyOrDie, Nico Video, etc. အစရှိသည်တို့ကို videos တိုက်ရိုက် ဒေါင်းလုဒ်ချနိုင်သည့်အပြင် video websites မှ ဇာတ်ကားများကိုလည်း Download ပြီးတာနဲ့ လိုချင်တဲ့ convert ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ URL ကိုယူပြီး Copy and Paste ထည့်ပေးရုံနှင့်လည်းအလိုရှိရာ video ကို Download ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
( Patch ) ဖိုင်လေးကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။